Ovao ny bateria amin'ny mpanara-maso ny tahan'ny fo - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ovao ny bateria amin'ny mpanara-maso ny tahan'ny fo
Ovao ny bateria amin'ny mpanara-maso ny tahan'ny fo
Nomena mpanara-maso ny tahan'ny fony izy ireo fa hariany satria tsy mandeha intsony. Ny baterian'ny mpampita dia lany ary tsy azo ovaina :)
Ireo maodely Polar taloha (ireo vaovao tsy haiko fa tsy mino aho) dia tsy namela nanova ny bateria rehefa lany, ka rehefa lany dia tsy maintsy mividy emitter vaovao na dia mandeha tsara aza ny zava-drehetra. Toa ny fahanterana efa nomanina ve izany?
Ny marina dia ity efa an-taonany ity, heveriko fa ilay maodely S-100
Andao aloha hanomboka amin'ny tsotra:
Ny tarika elastika. Toa maloto izy io, saingy tsy very toetra izy ary azonao atao ny manohy mitazona ilay emitterera mifatotra amin'ny tratranao, noho izany dia atsofanay mba hadio sy hanamboarana azy.
Ny dingana faharoa dia ny hijerena raha mandeha ny famantaranandro. Angamba ankoatry ny lany ny bateria dia nanimba ny LCD ary tsy misy azontsika atao.
Misokatra avy ao aoriana izahay, ary hanova ny bateria fotsiny.
Ary manararaotra manadio ny loto mihangona amin'ny tonon-taolana sy ny sarony isika.
Ny bateria dia CR2032, 3V. Ny zava-mitranga, ary manomboka eto dia manomboka ireo lahatsoratra botched :) dia ny fananako bateria iray hafa efa ela izay manana toetra mitovy aminy, fa antsasaky ny tavy kosa.
Noho izany dia mandeha amin'ny fudge haingana voalohany izahay amin'ny fampifanarahana ny haben'ny stack vaovao, ny taratasy mivalona, ​​ejejje.
Jereo ny zana-tsipìka, satria io takelaka io dia tokony hifandray amin'ilay tsato-kazo ratsy amin'ny bateria sy ilay fonony volamena, miaraka amin'ilay tsato-kazo miabo.
Amin'ity fomba ity no ametrahantsika ... taratasy, stack, taratasy ary ilay takelaka volamena, amboarintsika amin'ny lakaoly mafana sy taratasy kely hafa io ;-)
Eny, eny, marina ny anao, mora kokoa ny mividy ny bateria marina ary dia izay. Saingy noho ny fampiasana indray sy fanodinana izany.
Ary hamaranana ny famantaranandro dia averinay indray ilay sarony. Miaraka amin'izany rehetra izany, ny fihenan'ny monitor ny tahan'ny fo sy ny Water Resisten, tsara kokoa ny tsy manandrana azy, raha hapetrakao ao anaty pisinina sns., Adinoy ny momba ny tavoahangy ary mividiana ny bateria voalohany.
Na dia miasa amin'izao fotoana izao aza izy :)
Raha toa ahy ianao dia manana olana rehefa haka ny visy kely dia kely dia afaka manampy betsaka anao ny fikafika, ny fampiasana ny vodi-mason-doha. Raha tsy anananao ary ity no asan'ny botched nomerao 2, dia makà andriamby neodymium iray na roa, ary apetraho ao anaty screwdriver-nao. Mety tsara izany.
Eny ary isika dia mandroso amin'ny ampahany fahatelo ary azo antoka fa hamaky ity lahatsoratra ity ianao: ilay namoaka.
Tsotra ny fanovana, na dia hanao fudge No. 3 amin'ny lahatsoratra aza izahay, tapaho ny plastika, ovay ny batery ary apetaho indray :)
Raha nijery kely tamin'ny Internet aho dia nahita pejy fitsidihana bisikileta izay nanazavan'izy ireo taminay ny toerana hanaovana ilay fanapahana. Ny tsara indrindra dia ny fanapahana
Hanapaka ny tsipika mena amin'ny sary isika ary handinika tsara etsy ambany ny faritra izay mahatonga ny zava-drehetra hiasa.
Averiko ihany fa ny zavatra tsara indrindra dia ny fanapahana hokapaina ary mitandrema tsara.
Tonga izao ny zava-tsarotra iray hafa, ny terminal izay mikasika ny bateria dia soloina. Azonao atao ny mampiasa vy mandrendrika tsara, na tahaka ny nataoko dia ampiasao visy sy fantsom-by.
Amin'ny farany, raha vantany vao esorina ny bateria dia afaka mahita ny coil emitter an'ny monitor ny tahan'ny fo isika.
Ity koa CR2032, fa eto aho nividy ny bateria :)
Raha tsy te-hametaka ny antontany ianao dia azonao atao ny manamboatra azy amin'ny lakaoly mafana. Eo an-tampony foana ary mitandrina tsara.
Ary efa manana izany isika, manidy sy mametaka superglue na lakaoly hafa isika.
Fomba fanamboarana vera, ranomasina na vera an-dranomasina
Fomba fanamboarana tadio